Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii haalli Ityoophiyaa keessa jiru kan isa yaaddeesse tahuu beeksise - NuuralHudaa
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiiniin Mirga Namoomaa ibsa baaseen, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun rakkoon biyyattii keessatti muudate kan isa yaaddesse tahuu beeksise. Akka ibsa komishiinichaatti, ajjeecha kana balaaleffatuun ummanni magaalaa Finfinnee fi Naannoo Oromiyaa keessatti hiriira bahuun dallansuu isaa kan ibsate tahuu ragaa akka qabuufi, kanuma hordofuun naannolee tokko tokkotti humnoonni mootummaa tarkaanfii humnaa ol fudhataa jiran akka dhaabanis gaafate.
Gama biraatiin ammoo mootummaan yeroo ammaa biyyattii keessatti Interneetii cufuu isaatiin haalli jiru guututti maal akka fakkaatu kan hin beekamne tahuu ibsuun, gochi kun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga odeeffannoo barbaaduu, fudhachuu fi dabarsuu kan dhiibe tahuu ibse. Kun ammoo yaaddoo jiru daran hammeessa jedhe. Dhaabbatichi Mootummaan osoo hin turin tajaajila interneetii deebisuu qaba jechuunis gaafate.
Komishiniin mirga namoomaa UN ibsa baase keessatti, dargaggoota dabalatee qaamni hundinuu walitti bu’iinsi sabaa akka hin uumamne of eeggannoo akka godhan gaafate.
Dhuma irrattis maatiin Haacaaluu Hundeessa murtoo haqaa fi dhugaa argachuu qaban jechuun waamicha godhe.
yaa Allah attii dhugaaf dharas kan bekkuu sii qofa dhugaa tenaa nuuf basii amumatii nuu gahe gabrumaan bara baran ijjoollee kichuu nura fixuun haa dhabatuu yaa rabbii gahe jedhii nuuf awadhuu 😭😭😭😭🤲🤲🤲wollahi garran naa gubatee ummata lammii kiyyaaf:
Rabbiin Abbaa haqaati Abbaa dandeetiti nuf haa arguu Inashaallah
yaa Allah atii bekkaa argaa dhagahadhaa
dhugaa oromoo basii
foziyaa mammo says:
bakka jirtuu nutis ofi sodanee worri sabaa isan wolin Galuu akkami tan yaa rabbi Kuwait iraa